အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: May 2010
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:42 PM0comments Links to this post
Labels: Cheer, poem, Truth
“ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး..
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးသတ် တဲ့
ဒို့ မြေက ထွက်သော ၀င်ငွေ..
ရေနံလည်းပြုန်း တောလည်း တုံး
ရှိသမျှ လေလံ..ခိုးစရာ ရှိသမျှ ကြံ
ပြည်သူ ကဘဲ ကျောမွဲခံ
ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဆုံး ဓါးမြသာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းသုံး.
ဒို့ ပေးနေရသော အခွန်..
ဘယ်သို့ ရောက်..ဘယ်သို့ ပေါက်..
''မည်သူမဆို ကူညီသည် ဖြစ်စေ၊
ကိုယ်သာ သခင်ဖြစ် မလေ '' တဲ့
လုလင်ငယ်သွေး ဆိုသော သီချင်း
သခင် ဖြစ်ချင်..ကျွန်မခံကြနဲ့ .
ခေါင်းငုံ့ မခံကြနဲ့ 
ဘာမဆို လုပ်ကြရတမ်း ဆှို
စစ်သား တပြားသားမှ မလို
ဖွဲ့ စည်းကြ..ဒိုြ့ပည်သူ့အစိုးရ ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:59 PM 1 comments Links to this post
ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့ ..
ကျနော်တို့ သည်..မြေနဲ့ လုပ်စား..
ကျနော်တို့စိုက်ပျိုးကုန်ဖြင့်ဖြည့်ပါသည်။
ကျနော်တို့ သည်.. ခန္ဒာကိုယ်ခွန်အားရင်း
မပျင်းသော ကာယ အလုပ်သမားများပါ။
အလုပ်ကြမ်းမှန်သမျှ ထောက်ပို့ ကြရသူ။
ကျနော်တို့ သည်.. ပညာကူ..
ပြည်သူဝန်ထမ်း ဥာဏ အလုပ်သမားများပါ။
မလျှော့သော လုံ့ လရှိကြသူတွေပါ။
ကျနော်တို့ သည်.. လက်နက်ကိုင်
နိုင်ငံတော် မြေပုံမပျောက်ဖို့ 
ကာကွယ်တဲ့ ၀န်ထမ်း..အမိန့် နာခံသူ
ရဲ စစ်သား လုံထိန်းများဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ သည်.. ဥပဒေ၏ ဘက်တော်သား.
လက်တလုံးကြား ဥပဒေ ပုဒ်မ.တွေကြား
ကျနော်တို့ ၏ ရထိုက်သော ၀င်ငွေ.
ကျနော်တို့ ၏ ပေးရမဲ့အခွန်..
လူသားတို့ ၏ လိုအပ်ချက်..
ရေ အစိုဓါတ် ၆၀% ပါသော ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်။
သမီးတော်အား စိန်စီရန် မလို
ရွှေကို မလို ..
အကယ်၍သာ သင်သည် မင်းကောင်း
ပြည်သူကို တကယ်ချစ်တယ်ဆို..လက်တွေ့ ပြ။
မသဒ္ဓါ (၅။ ၁၅။ ၂၀၁၀)
သူများအတွက် လုံးဝ မပူတတ်သူ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:02 AM0comments Links to this post
အဖြေမရှိသော ပုစ္ဆာဆိုသည်မရှိ..ကြိုးစားစိတ်ရှိ အဖြေရှိတယ်.
အဓမ္မ.. ဓမ္မ.. မှန်တာက နိူင်တယ်ဆိုပေမဲ့..
ဒီလိုဖြေရခက် ပုစ္ဆာ ဘယ်လိုအဖြေညှိရမလည်း
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စစ်..အခုထိ ရန်ဖြစ်ဆဲ..
မေတ္တာ တရားရဲ့ ပရိတ်သံ ဓမ္မ..
ယမ်းငွေ့ အောက်မှ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ..
ဘယ်သူ့ မှာ အပြစ်ရှိသလည်း
ဒီလိုဘဲ ငြိမ်ခံ..အနာဂတ်ကို ဆက်ရေးကြမလား..
မတရားတာ ငုံ့ ခံနေသမျှ..
ဘယ်တော့ မှ လွတ်လပ်ကြမယ်မဟုတ်ဖူး..
ဗိုက်ကြီးသည် ကလေးမျက်နှာ မြင်ချင်..
မိမိ ကိုယ်တိုင် သာအားထုတ်ညှစ်..
၀မ်းဆွဲသည် ကို အပြစ်မတင်ပါလှင့်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:09 AM0comments Links to this post
လေအလာမှာ ယိမ်းနေတဲ့ အုန်းလက်…
ညက အိမ်မက်ဆိုးတွေ မက်တယ်…
မုတ်သုန်ညရောက်တိုင်း အအိပ် ပျောက်ခဲ့ရသူ
ပေ ၂၀ကျော် အမြင့် နံရံလှိုင်းလုံး
မြစ်ကမ်းစပ်က ရွာကလေးတရွာရဲ့ အလှ
အဖေ အမေ အဘ အမ..
ကျီးပြိုသံတွေ ကျနေတဲ့ ည..
ရွာလုံးကျွတ် ခ၀ါကျတဲ့ ဘ၀..
ပါးစပ်အဟောင်းသား ကြောက်လန့် တကြား..
သူ့ ကို..ကယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း
ဒီတညလည်း...ရင်ထုမနာ လန့် နိုးခဲ့ပြန်ပြီ..
လန့် အနိုး သတိတရ..
ဧပြီ ၃၀ ။ ၂၀၀၈၊
မသဒ္ဓါ ရဲ့ CBox မှာ
စေတနာ မေတ္တာများစွာနဲ့ ..သတင်းပေး
မသဒ္ဓါ တတ်နိုင်သမျှ နီးစပ်ရာ..
ဖုံး မချတမ်း ဆက်ခဲ့ပါရဲ့..
မသဒ္ဓါ ဆိုတဲ့ သာမာန်ကဗျာရေးသူဟာ
မိုးလေ၀သ သတင်းဌာန၀န်ထမ်း မဟုတ်ရပါ။.
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲလို အကုန်သိ."ဦးတပ်ပါ့".
လိုအပ်တာများ မှာကြားတတ်သူ မဟုတ်ရပါ။.
တောက်တဲ့ ကိုလူပေါ ဦးထွန်းလွင် လည်းမဟုတ်ပါ။
မီဒီယာသမားကြီး လည်း မဟုတ်ရပါ.
RFA, VOA, SBS, BBC, DVB
အာဇာနည် နဲ့ကိုမိုးသီး..
လူလာ အဖတ်များတဲ့ ဘလော့တွေပေါ်..
ဧရာဝတီ အစွန်အဖျား ဆားချက်တဲ့ရွာသား
အင်တာနက်မသိ..မသဒ္ဓါ ကို မသိ..
လုံခြုံပြီ..ထင်ပြီး အိပ်တဲ့ တဲမိုးအိမ်ထဲ
ခန့် မှန်းခြေ သေသူဦးရေ ၁၄၀,၀၀၀
ရွှေဘဘ တို့ရဲ့ အစိတ်သား အခြေခံဥပဒေ..
နအဖ မသေဖို့ ဘဲ ဒီအတ္တ
လူသိန်းကျော်အလောင်းနဲ့ လဲ ..ငါမလဲဖို့ သာအရေကြီးတယ်..
အခုထိတော့ အိမ်မက်ဆိုး မက်နေဆဲ..
ဘဘ ရေ..ပျော်အောင် အိပ်ပါလေ..
ဖ၀ါးတင်ပါးကျ သင်သာ ပြေးလိုက်ပေတော့။
မုန်တိုင်းတွင်း သေဆုံးသွားသော ၀ိညာဉ်များအား ပြုခဲ့သမျှ ကုသိုလ်တို့ အားအမျှ ပေးဝေပါသည်။
မသဒ္ဓါ အနေဖြင့်..မုန်တိုင်းသတင်းကို သိပြီး ပေးရန် အချိန်မီ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း..အားလုံးသိမှီအောင် စွမ်းဆောင်နိူင်မှု ညံ့ဖျင်းသောကြောင့် တစုံတရာ..မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် သင်တို့ ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် များအတွက်..အလွန်တရာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။
သင်တို့ ၏ ၀ိညာဉ်များ အားအမှုးထား၍ တိုင်တည်ပါသည်။
ဤ မုန်တိုင်းသတင်းကို..သူအမှန်တကယ် သိပါရက်နဲ့ ..
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲအမည် မတန်မရာ ခံယူထားပါလျှက်နဲ့ ..
အချိန်မှီ ပြည်သူများအား ၄၈ နာရီအတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားရေး လုပ်ငန်း များကို လုပ်ပေးနိုင်ပါရက်နဲ့ 
သွေးအေးစွာ..မဆိုင်သလိုနေ..မလုပ်ပေးဘဲ စေ တနာအလျှဉ်းမျှ မကြင်နာဘဲ သင်တို့ ၏ အသက်များ စွာ ရင်း၍ အတည်ပြု အနိုင်ရယူ..လိမ်ညာခဲ့သော နိုင်ငံတော် အကြီးမားဆုံး လျှစ်လျှုရှု မှု ကို စံနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြီးအကဲများ အား အပြစ်ပေးကြပါလော့.. သွားလေရာဘေး.. လာလေရာဘေး.. ရန်သူမျိူး ငါးပါး. .၀ိုင်းရံ ဘေးခရအောင် ပြစ်ဒဏ်ခတ် ချောက်လှန့် ပေးကြပါလော့။
အိုဘဲ့....နာဂစ် တစ္ဆေ ၀ိညာဉ်များစွာတို့ 
နေစိမ့် သော..မိမိ အဖို့ သာသိတတ်..မြင်အပ်သော လူယုတ်မာများအား. အိပ်ကောင်းခြင်း.. စားကောင်းခြင်း.. လုံးဝ ကင်းစင်စေရန်.. ညအခါမလပ်.. ခြောက်လှန့် ကြပါလော့..
သင်တို့ ၏ သေဆုံးသော ဘ၀များစွာသည်..ဤ အကြီးအကဲများ၏ တာဝန်ဝတ္တရား ပေါ့လျှော့မှူသာဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သေဆုံးသူတို့ ၏ တွန်မည့် အရိုးပေါင်း..များစွာ.. ရှင်သန် ထမြောက်. . တာဝန်မဲ့သူများအား ခြိမ်းခြောက်ကြပါကုန်။..
မောင်လေး KO သို့ စာပြန်ခြင်း
( http://www.platonicloveaugust4.blogspot.com/ ) မှ
မသဒ္ဒါရဲ့ စီဘောက်ထဲက တာဝန်သိ ၊ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ လူတွေ ရဲ့ ကြိုတင်သတိပေးချက်
မြန်မာပြည်မှာ မုန်တိုင်းပြင်းထန်မယ်ကို ပြည်ပ က လူတွေက သိပေမယ့် ပြည်တွင်းက လူတွေ မသိခဲ့ရရှာပါဘူး၊
http://thadar.blogspot.com/ ဘလော့တစ်ခုက စီဘောက်ထဲမှာ မြန်မာတစ်ချို့က ဧပြီ(၃၀)၊ မေ(၁)ရက်နေ့က စပြီး စိုးရိမ်တကြီး (၂) ရက် ကျော်ကြိုတင် သတိပေးခဲ့တာပါ ။ သတိပေးတာကလဲ အတိအကျ ပေးတာပါ။ သူတို့ သတိပေးတဲ့ အတိုင်းလဲ အတိအကျဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် လူတိုင်းနီးပါးဟာ အမှတ်မဲ့ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်သွားတာဟာ ပြည်ပ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေဟာ ပြည်တွင်းကလူတွေကို ကြိုတင် သတိပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲပါပါတယ်။ ဘလော့တွေ ကနေတဆင့်၊ ဂျီတော့တွေကနေ တဆင့် ကျွန်တော်တို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိတိကျကျ ပြည်တွင်းက သူငယ်ချင်းဆွေမျိုးတွေကို သတိမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဧရာဝတီတိုင်းက လူတွေ မပြောနဲ့ ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေတောင် ကျွန်တော်တို့ မုန်တိုင်းရှိတယ်လို့ ပဲရိုးရိုးတန်းတန်း သတိပေးခဲ့မိတာပါ။ မုန်တိုင်းပြင်းမယ်လို့ သတိပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင် မုန်တိုင်းအပြီးမှာ ရန်ကုန်လူထု ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ရလို့ ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းတွေကို 01667766 မှာမေးနိုင်ပါတယ် သတင်းရရင်လက်ဆင့်ကမ်း ပေးကြပါအုံး
1 May 08, 17:53
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်အကြာင်မယုံကြပါ မုန်းတိုင်းအရေးပေါ်ကြေငြာချက်များထွက်ဟန် မတူသေးပါ အဲဒီမုန်တိုင်း လမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ မြို့တွေကို ၀ိုင်းကူဖုန်းဆက်ပေးကြပါအုံး
1 May 08, 17:52
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းကြီးဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းသလဲ ဂူဂယ်အတ်ကနေ ၀ဲသာကို ကလစ်ဖွင့်ပြီး ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ် လောလောဆယ် ဖျာပုံ ပုသိမ် ကလူတွေက
1 May 08, 17:26
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းဗဟိုနှင့်အနီးမိုင်၂၀အတွင်းတွင် တနာရီမိုင်၁၂၀အထက်လေတိုက်မည် မုန်တိုင်းဒီရေ ၁၅ပေခန့်မြင့်မည်
ခန့်မောင်: နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ဧရာဝတီတောင်ပိုင်းကို ဟိုင်ကြီးကျွန်းအနီးမှဖြတ်မည် လေတိုက်နှုန်း တနာရီမိုင်၆၀ကျော်မည်
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းသည် မိန်းမလှကျွန်းနောက်ဖက်မိုင် ၉၀ခန့်တွင်ရောက်ရှိနေပါပြီ ပိုပြီးအားကောင်းလာ နေပါ သည် အရှေ့ဘက်သို့ လျှင်မြန်စွာရွေ့နေသည်
1 May 08, 16:53
ခန့်မောင်: ရန်ကုန်တွင်လေးပြင်တိုက်က ဆိုင်ဘုတ်ကြီများ တုံးလုံးလဲသွားနိုင်သည် မုန်တိုင်သတင်းကိုဒီနေ့ တောက်လျှောက် စောင့်ကြည့် ပေးကြပါ လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ
ခန့်မောင်: မော်တင်စွန်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်မည် ရန်ကုန်အနီးသို့ ဒီညတွင်ဖြတ်လိမ့်မည် ဧရာဝတီတိုင်း၏ ပင်လယ်နှင့်ထိစပ်နေသော အပိုင်းများ စိစိညက်ညက်ကြေသွားနိုင်သည်
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်အထူးသတင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် လောလောဆယ်တွင် လတ်15.8 နှင့် လောင် 91.2 မထင်မှတ်ပဲ အရှေ့သို့ဆက် ရွေ့နေသည် ခန့်မှန်ချက်အရ ဒီနေ့မနက် ၇နာရီတွင်
1 May 08, 12:19
okokok: မော်တင်စွန်းနဲ့ဆို မိုင်နှစ်ရာပဲဝေးပါတော့တယ် လပွတ္တာမြို့ကတောအိပ်ပျော်နေဆဲပါ သူတို့အပေါ် မုန်တိုင်းကြီး ကျော်တော့မယ်ဆိုတာ သိပုံမရရှာပါဘူး အားလုံးလက်ဆင့်ကမ်းသတိပေးကြပါ
ညီညီ: မော်တင်စွန်းနဲ့ဆို မိုင်နှစ်ရာပဲဝေးပါတော့တယ် လပွတ္တာမြို့ကတောအိပ်ပျော်နေဆဲပါ သူတို့အပေါ် မုန်တိုင်းကြီး ကျော်တော့မယ်ဆိုတာ သိပုံမရရှာပါဘူး အားလုံးလက်ဆင့်ကမ်းသတိပေးကြပါ
ညီညီ: မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းပါတယ် လောလောဆယ် လတ် 15.5 နဲ့ လောင် 92.1 မှာရှိနေပါတယ် ဒီပုံစံအတိုင်းဆို ဧရာဝတီတိုင်း အောက်ပိုင်းကတော့ စိစိညက်ညက် ကြေမယ့်ပုံပါပဲ
1 May 08, 08:02
ခန့်မောင်: သိချင်တာတွေ မိုးလေ၀သ ဖုန်း 01 665944 သို့ဖုန်းဆက်မေးနိုင်ပါသည်
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းစင်တာလမ်းကြောင်းဦးတည်ရာ၏ ညာဘက်တွင် လေမှတွန်းတင်ထားသော လှိုင်းလုံးကြီး များက ကမ်းခြေသို့ဝင် ဆောင့်တတ်သည် ယခု လှိုင်းများ ၂၇ပေထိမြင့်မည်ဟု ခန့်မှန်းနေသည်
1 May 08, 07:56
ခန့်မောင်: အချင်းဝက်မိုင်၂၀အတွင်း လေတိုက်နှုန်း မိုင်တရာကျော်သည် အချင်းဝက်မိုင် ၂၀မှ ၁၂၀ အတွင်း မိုင်၅၀မှမိုင် ၈၀အတွင်းရှိသည် တတိယ လှိုင်းလုံကြီးများ မုန်တိုင်းသည် လက်ယာရစ် လည်သည်
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းတွင် အဖျက်စွမ်းအား ၃မျိုးရှိသည် ပထမ မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်းဖြစ်သည် ရေကြီးခြင်း တမံကျိုးခြင်း တောင်ပြိုခြင်းများဖြစ်နိုင်သည် ဒုတိယ လေပြင်းထန်ခြင်း မုန်တိုင်းစင်တာနှင့်
1 May 08, 07:24
ခန့်မောင်: ၃ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် ကယားနှင့်ရှမ်းတောင်ကြားသို့ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ ဖျက်ဆီးအား ကြီးမားမည်ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းကြောင်းကျနေသော မြို့ရွာများသို့ လက်လှမ်းမီသလောက် ကြောင်းကြားသတိပေးကြပါ
ခန့်မောင်: ဂွမြို့နှင့်သံတွဲမြို့သည် အနီရောင်စိုးရိမ်မှတ်တွင်ရှိနေသည်။ ရန်းဗြဲ မန်အောင်နှင့် ပုသိမ်တို့သည် အ၀ါရောင်စိုးရိမ်အမှတ်တွင်ရှိနေသည်။ အဆိုပါနေရာမှ ရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းသို့ တစ်နာရီ ရေ(၇)မိုင်နှုန်းဖြင့်ရွေ့နေသည်။
1 May 08, 07:23
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းဗဟိုတွင်လေတိုက်နှုန်းတနာရီ မိုင်တရာကျော်လာပြီဖြစ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၃၇၀တွင်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ မူလခန့်မှန်းထားသော ၂ရက်နေ့သန်းခေါင်ယံထက်စော မည်ဖြစ်သည်။
ခန့်မောင်: နာဂစ် ခေါ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်သည် ယနေ့တွင် အဆင့်နှစ်မှ အဆင့်တစ်သို့ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည် မုန်တိုင်း၏အချင်းဝက်သည် မိုင်တရာကျော် အမြင့်သည် ဆယ်မိုင်ကျော်အထိ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာသည်
30 Apr 08, 13:03
ကယ်ကြပါအုံး: မသဒ္ဓါ ကိုအားကိုးပါတယ်
ကယ်ကြပါအုံး: တနာရီ မိုင်တရာကျော်နှုန်းလေတိုက်မယ်လို့ ပြောပါတယ် ဒီမှာအသေးစိပ်ကြည့်ပါ
30 Apr 08, 13:02
ကယ်ကြပါအုံး: Nargis လို့ခေါ်တဲ့မုန်တိုင်း ဗမာပြေကိုဝင်မယ် ရန်ကုန်နားကဖြတ်မယ် အပျက်အစီး အထိအ ခိုက်များမယ် လို့ သိရတယ် အားလုံးကိုအကြောင်းကြားပေးကြပါ
Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) said...
ဟုတ်ကဲ့ ko ရှင့်
မသဒ္ဓါ တာဝန်သိ တာဝန်ကျေ ပြည်သူပါ..သတင်းရလျှင်ရချင်းဘဲ..အာဇာနည်နဲ့ကိုမိုးသီး ဘလောက်များ ပေါ်သို့ မုန်တိုင်း သတင်း ကို တိုက်ရိုက်ပို့ ပြီး တင်ပေးပါတယ်..ဘာလိုလည်း ဆိုတော့ မသဒ္ဓါ ဘလော့ ဆီထက် စာရင် ဟိုဘက်ကို သွားတဲ့လူတွေက များလို့ ပါ. ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ မသဒ္ဓါ ဟာ မုန်တိုင်း ကိစ္စ သတင်း update တွေ ရော..ရသမျှ အချိန်မီ ရသမျှ တင်ပေးပါတယ်.။
ဒီလောက်ထိ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာ တကယ်ဘဲ ကြေကွဲ ၀မ်း နည်းရပါတယ်မောင်ငယ်..ဒီလောက် ထိခိုက် တဲ့ကိစ္စကြောင့် စိတ်ထိခိုက်င်္ပြီးကဗျာ မရေး နိုင်တဲ့အတွက် ခုတလော မသဒ္ဓါ ကဗျာထွက်ကြဲတာပါ. လေမွန်း ကြပ်ရှူမရ သေသူနဲ့ ရေမွန်းကြပ် သေတဲ့လူတွေအတွက် မသဒ္ဓါရဲ့ နှလုံးသား လည်းမွန်းကြပ်ခဲ့ပါတယ်.
အပြစ်တင်လိုက တင်ပါ မောင်ငယ်။။ တကယ်လို့မသဒ္ဓ့ါ တာဝန်မကျေတာ ရှိခဲ့ရင်။
ခလေးတယောက်လာရေးတဲ့..အမကြီးကို အားကိုးပါတယ် မသဒ္ဓါ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကြောင့် မသဒ္ဓါ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူဘဲ ပုတ်ထုတ် ပုတ်ထုတ်။ဘယ်သူဘဲ ကဲ့ရဲ့ ဆိုဆို၊ ချစ်ရတဲ့ မောင်ငယ်ညီမငယ် အားလုံး ကို လစ်လျှုရှူ ထွက်မပြေး နိူင်ခဲ့ပါဘူး.မသဒ္ဓါက နိူင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်။ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် လည်းမဟုတ်။ ခံစားပြီးသာ ကဗျာရေးသူ သာဖြစ်တဲ့အတွက်..မသဒ္ဓ့ါရဲ့ပြည်သူများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှု အတိုင်းအတာ.စိတ်ကျေနပ်စရာ မလုံလောက်ခဲ့ဘူုး ဆိုခဲ့ရင် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။
လာရောက်ပြီး မုန်တိုင်း သတင်းပေးသူများ ကို ကျေးဇူးတင်ရှိ်ပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:00 PM0comments Links to this post
လိုချင်ရင်...ရအောင်ချူလော့ ၊ သင်၏အခွင့်အရေး သင်လက်...
အဖြေမရှိသော ပုစ္ဆာဆိုသည်မရှိ..ကြိုးစားစိတ်ရှိ အဖြေရ...